Maalmaha Xoriyadda oo laga hadlay – Radio Muqdisho
Maalmaha Xoriyadda oo laga hadlay
Guddoomiyaha Guddiga Qaban qaabada Xuska Todobaadka Xoriyadda ahna Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan xuska maalmaha qiimaha badan ee Todobaadka Xoriyadda kuwaas oo nagu soo wajahan.
Dhanka kale Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi xayir Maareeye ayaa ugu baaqay Madaxda Mamul Goboleedyada dalka ka jira inay ka qayb qaataan Xuska maalmaha Qaranka ee Todobaadka Xoriyadda.
Hadalka Wasiirka ayaa yimid Kaddib kulan ay isugu yimaadeen xubnaha ka mid ka ah Guddiga Heerka qaran ee qaban qaabada Munaasabadaha maalmahaTodobaadka Xoriyadda oo ka dhacay magaalada muqdisho, isla markaana looga hadlay sida loogu diyaar garoobi lahaa maalmaha Qaranka.
Maalmaha qiimaha badan ee Todobaadka xoriyadda Soomaaliya ayaa nagu soo food leh qofkasta oo muwaadin ahna waxaa looga baahanyahay inuu si wanaagsan uga qayb qaato, madaama ay yihiin maalmahaas Waqtigii Ummadda Soomaaliyeed Xoriyadda Qaateen.
Walaalaha Turkiga oo Afuriyay Qoysas Danyar ah